2010 - Knowledge is Free
Canon iP3680 Resetting
Canon iP3680 တွင် Power နှင့် Resume ခလုတ်မီးတို့ တစ်ကြိမ်စီ အလှည့်ကျ မှိတ်ချည်ပေါ်ချည် လင်းနေပါ မည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ Printer အတွင်းရှိ Ink Absorber မှာ ပြည့်လုနီးပါး ဖြစ်နေမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Printer ရဲ့ Counter Protection များကို ရှင်းလင်းရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်များအတိုင်း ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပေသည်။
Reset ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် မစတင်မီ ရှေးဦးစွာ Power Cable နှင့် USB Cable များကို သေချာစွာ တပ်ဆင်ထားပေးပါ။ ထို့နောက် iP3680 Service Tool ကို download ပြုလုပ်ထားပါ။
ပထမအဆင့် ( Service Mode သို့ ၀င်ရောက်ခြင်း)
- Power ကြိုးများကို မဆွဲဖြုတ်ပဲ Power ကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ။
- Resume ကို ဖိထားလျှက် Power ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖွင့်လိုက်ပါ။ (Power ကိုဖိထားလျက်ပင် Resume ခလုတ် ကို လွှတ်လိုက်ပါ။)
- ထို့နောက် Resume ခလုတ်ကို (2)ကြိမ်တိတိ ဆက်၍နှိပ်၊ Power ခလုတ်ကို လွှတ်လိုက်ပါ။
- ထိုအခါ အလှည့်ကျလင်းနေသော error မီးမှာ ပျောက်သွားသည်ကို သတိပြုကြည့်ပါ။ ယင်းကဲ့သို့သော အခြေ အနေမှာ Service Mode အတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းကို ပြသပါသည်။
ဒုတိယအဆင့် ( Resetter ကို အသုံးပြုခြင်း )
- Download ပြုလုပ်၍ ရရှိလာသော "iP3680.exe" ဖိုင်ကို ဖြည်ထုတ်၍ Double Click ပြုလုပ်ပါ။
- Reload ကို Click နှိပ်၍ USB Port ကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။
- Printer တွင် စာရွက်အနည်းငယ်ထည့်ထားပေးပြီး Main ပေါ်တွင် click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ။ Print ထုတ်သည် အထိ ခေတ္တစောင့်ပေးရပါမယ်။
- ထို့နောက် EEPROM Clear ကိုနှိပ်၍ Printer ရဲ့ EEPROM ကို ရှင်းပေးလိုက်ပါ။
- ပြီးနောက် EEPROM ကို click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ Printer မှ စာသားအချို့ကို Print ထုတ်ပေးပါမယ်။
- ထို့နောက် Power ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ပိတ်လိုက်ပါ။ (တစ်ခါတစ်ရံတွင် Power ခလုတ်ကို နှစ်ချက်နှိပ်၍ ပိတ်ပေး ရသည်လည်း ရှိတတ်ပါသည်။) ပြီးနောက် Power ကို တစ်ဖန်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါမည်။
Posted by kmo at 10:50 AM No comments:
How to reset Samsung SCX-4300 toner counter
Samsung SCX-4300 Printer အားဝယ်ယူစဉ်က တွဲလျက်ပါရှိလာတဲ့ Toner Cartridge များဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Counter အရေအတွက် ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုရင် ဆက်လက် ထုတ်ယူရန် ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။ Menu ထဲတွင်လည်း Toner Exhausted, Replace Toner ဆိုတဲ့ error massage များပြသပြီး အနီရောင် Status လေးနဲ့ အချက်ပြနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့ Toner Cartridge ဟာ ဆေးအသစ်များ ထပ်မံ ဖြည့်သွင်းထားပေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ရပ်တန့်နေပေလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့် ယခုဖြစ်စဉ်မှာ သင့်အား မင်အားလုံးကို ဆက်လက် အသုံးပြုခွင့် မပြုတော့ခြင်းပင်။ (လုပ်ထားအုံးပေါ့)
ှုInternet ထဲမှ ရှာဖွေလေ၊ တွေ့ရှိလေ ဆိုတဲ့အချက်များအရ Samsung SCX-4300 ပရင်တာရဲ့ Reset Ink Counter ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြ ရေးသား အပ်ပါတယ်..။
(1) ပထမဦးစွာ SCX-4300.zip (mirror ) ကို download အရင်ချထားရပါမယ်။
(2) ရရှိလာတဲ့ Zip File ကို ( C:\_ ) ရဲ့အောက်မှာ သွား၍ extract ပြုလုပ်ထားပေးပါ။
(3) ပြီးနောက် Command Prompt ကို ဖွင့်ရန်အတွက် Start > Run > cmd ဟု ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
(4) Command Prompt ပွင့်လာပါက ( cd\_ ) ဟု ရိုက်ထည့်၍ C:\_ ကို ပြန်သွားပါမယ်။
(5) Folder များကို ပြန်ကြည့်ရန်အတွက် ( dir/w )ဟု ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဆက်လက်၍ ( cd SCX4300 )လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး directory ပြောင်းလိုက်ပါမယ်။ ထိုအခါ မြင်ကွင်းတွင် ( C:\_SCX4300>_ ) လို့ ပြသနေပါ လိမ့်မယ်။ တစ်ဖန် ယင်းသို့ ပြသနေချိန်မှာပင် ( dir/w )လို့ ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုရင် ယင်း Folder ရဲ့ အတွင်းထဲကို ၀င်ရောက်သွားပြီပေါ့။
(6) ဆက်ပြီး fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး enter တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ (အလယ်မှာ space ပါပါတယ်)
(7) ဒီ script လေးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ယခင်ကနေရာရွေ့ပြောင်းထားတဲ့ C:\_SCX-4300 ရဲ့ Folder လေး အတွင်းကို FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd ဆိုတဲ့ ဖိုင်သစ်လေးတစ်ဖိုင်ကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ သင့် printer flash memory အတွက် မတူညီတဲ့ serial များကိုလည်း ဖန်တီးပေးသွားပါတယ်။ ယခု ရိုက်ထည့်လိုက်သည့် command များကြောင့် DOS Mode တွင် မြင်တွေ့ရသည့် ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
(8) ထပ်မံပြီး Printer ရဲ့ Service Mode ကို ဆက်သွားကြည့်ရအောင်။ Printer ရဲ့ Menu, Copies <, >, Menu, > ဆိုတဲ့ button ခလုတ်တွေကို တိကျမှန်ကန်စွာနဲ့ အလျင်အမြန် ဆက်နှိပ်ပေးသွားရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် TECH MODE ဆိုတဲ့ စာသားကို Printer ရဲ့ Screen ပေါ်မှာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့် Printer မှာ TECH MODE မပေါ်ခဲ့ပါက ထပ်မံပြီး ဖော်ပြပါ ခလုတ်တွေကို ပြန်နှိပ်၍ ကြိုးစားကြည့်ပေးပါ။ ရသွားပါလိမ့်မယ်။
(9) Menu ခလုတ်ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ DATA SETUP -->CLEAR COUNTER --> CLEAR ALL CNT ကို ရွေးချယ်၍ clear လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ Status LED ရဲ့ Printer မီးဟာ အ၀ါရောင်ပြသနေရာမှ အစိမ်းရောင်သို့ ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကဲဒါဆိုရင်.. သင့် printer ရဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဆေးတွေဟာ သုံးလို့ ရသွားပြီပေ့ါ။
Posted by kmo at 2:16 PM No comments:
Memory ရဲ့ Transfer Rate ကို တွက်ချက်ခြင်း
Dynamic Random Access Memory ကို အများစုက memory လို့သာ ခေါ်ကြပါတယ်။ Memory အမျိုးအစား များစွာ ရှိပါတယ်။ Memory ကို ကွန်ပျူတာမှာ ယာယီမှတ်ဉာဏ်အနေနဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။ Memory အကြောင်း ပြောရင် ဘယ်လောက်သိမ်းဆည်းပေးနိုင်သလဲဆိုတဲ့ size ကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ရှေးကတော့ ကွန်ပျူတာတွေ မှာ 256MB, 512MB သာ ပါဝင်ပေမယ့် ယနေ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ အနည်းဆုံး 1GB အထိ ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Memory အကြောင်းပြောရင် memory speed ကို ချန်ထားလို့ မရပါဘူး။ Speed ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ unit က Hz နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ DDR memory တွေရဲ့ Speed က 266, 333, 400MHz ဆိုပြီး သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
Memory နဲ့ CPU ဆက်သွယ်တဲ့အခါ data bus တွေကို အသုံးပြုရပါတယ်။ Pentium4တွေရဲ့ External data bus က 64 bit ဖြစ်ပါတယ်။ 8 bit ကို 1 byte ရှိတဲ့အတွက် 8 bytes ရှိပါတယ်။ DDR memory ရဲ့ data bus width က 64 bit (8 byte) ကို အသုံးပြုပါတယ်။ Memory ရဲ့ Speed နဲ့ bus width ကို မြှောက်ပေးရင် တစ်စက္ကန့်မှာ data ပို့ပေးတဲ့ transfer rate ကို ရရှိပါတယ်။
Transfer Rage = Memory Speed x Memory bus width
= 400 MHz x 8 bytes
= 3200 MB/s
DDR 400 MHz ရဲ့ transfer rate က 3200 MB/s ရှိတာကို သိလောက်ပါပြီ။ ဒီအတွက် PC 3200 လို့ ခေါ်ပါ တယ်။
SMAC in Numbers
Memory Technology Rated Clock Real Clock Maximum Transfer Rate
PC66 SDRAM 66 MHz 66 MHz 533 MB/s
PC100 SDRAM 100 MHz 100 MHz 800 MB/s
PC133 SDRAM 133 MHz 133 MHz 1,066 MB/s
DDR200 DDR-SDRAM 200 MHz 100 MHz 1,600 MB/s
DDR266 DDR-SDRAM 266 MHz 133 MHz 2,100 MB/s
DDR333 DDR-SDRAM 333 MHz 166 MHz 2,700 MB/s
DDR400 DDR-SDRAM 400 MHz 200 MHz 3,200 MB/s
DDR2-400 DDR2-SDRAM 400 MHz 200 MHz 3,200 MB/s
DDR2-533 DDR2-SDRAM 533 MHz 266 MHz 4,264 MB/s
DDR2-667 DDR2-SDRAM 667 MHz 333 MHz 5,336 MB/s
DDR2-800 DDR2-SDRAM 800 MHz 400 MHz 6,400 MB/s
DDR3-800 DDR3-SDRAM 800 MHz 400 MHz 6,400 MB/s
DDR3-1066 DDR3-SDRAM 1066 MHz 533 MHz 8,528 MB/s
DDR3-1333 DDR3-SDRAM 1333 MHz 666 MHz 10,664 MB/s
DDR3-1600 DDR3-SRAM 1600 MHz 800 MHz 12,800 MB/s
Resource: September | 2010 | Personal Computer ( ဦးအေးကိုကို၊ B.E (Electronics), FEB Computer Centre
Posted by kmo at 10:34 AM No comments:
Canon Printer ip2770 Printer Series များ၌ စာရွက်အရေအတွက် counter ပြည့်သွားသောအခါ Resume button တွင် လိမ္မော်ရောင်မီး (၈)ကြိမ်တိတိ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ပြသနေပါလိမ့်မည်။ Print ထုတ်ကြည့် သောအခါမှာလည်း Service error 5B00 ဖြစ်နေကြောင်း ပြသနေပါလိမ့်မည်။ သတ်မှတ်ထားသော counter ပြည့်သွားပြီး Waste Ink Absorber Full ဖြစ်ခြင်းကြောင့် Error တက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Canon ip2770 model များတွင် Absorber full ဖြစ်တိုင်း ပြုလုပ်ပေးရမည့် ဖြေရှင်းချက်လေးတွေလည်း internet ထဲတွင် အမြဲပင် ပေါ်ထွက်လျှက်ရှိပါသည်။
(1) ရှေးဦးစွာ Service Tool ကိုလည်း download ပြုလုပ်ထားပါ။ အကယ်၍ သင့် Printer Model မှာ iP2772 ဆိုပါက PCM_Service Tool ကို download ပြုလုပ်ရပါမယ်။
(2) Download ပြုလုပ်၍ ရရှိလာသည့် "ip 2770.doc" ဟူသော file ရဲ့ အမည်ကို "ip 2770.exe" ဟု extension ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါ။
(3) ထို့နောက် ယင်း File ပေါ်တွင် double click နှိပ်၍ open လုပ်ရပါမယ်။
(4) တပ်ဆင်ထားသော printer USB port နှင့်ထည့်သွင်းထားသော Printer driver တို့ ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိကို သတိပြုရပါ့မယ်။ စစ်ဆေးကြည့်ရန်မှာ Start | Control Panel | Printers and Faxes ပေါ်တွင် click နှိပ်၍ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် Canon iP2770 Series ပုံပေါ်တွင် right click နှိပ်၍ Properties ကို ရွေးချယ် click နှိပ်ပေးပါ။ Port နှင့် Printer တို့ ကိုက်ညီမှု ရှိပြီဆိုပါက service mode ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။
(5) သင့် printer ကို reset မပြုလုပ်မီ POWER နှင့် USB Cable ကြိုးများကို ကြိုတင်၍ တပ်ဆင်ထားပါ။
(6) ထို့နောက် printer ရဲ့ POWER နှင့် RESUME ခလုတ် (၂)ခုကို တွဲလျက် ငါးစက္ကန့်ဝန်းကျင် ဖိထားပေးပါ။
(7) ထိုသို့ ဖိထားလျက်ပင် RESUME ခလုတ်ကို (၅)ကြိမ်တိတိ ဆင့်နှိပ်ပါ။ (POWER ကို မလွတ်ရပါ)
(8) ထိုကဲ့သို့ အမှားအယွင်းမရှိဘဲ လုပ်နည်းမှန်ပြီဆိုပါက အစိမ်းရောင် flash မီးလေးမှာ အဆင်သင့် အနေ အထားနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
(9) ပြီးတော့ စောစောက ဖွင့်ထားတဲ့ Service Tools ကို ပြန်သွားလိုက်ပါ။
(10) အထက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်း Service Tools ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- ရှေးဦးစွာ USB Port ကို ရရှိရန်အတွက် Reload ပေါ်တွင် click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
- ထို့နောက် စာရွက်(၂)ရွက်ကို printer တွင် ထည့်ထားပေးပါ။
- Clear Ink Counter ရဲ့အောက်ဖက်ရှိ Main ပေါ်တွင် click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ (အကယ်၍ သင့် printer တွင် error 001 ဟူ၍ ပြသခဲ့ပါက Ok ကိုသာ ဆက်၍ click နှိပ်ပေးပါမည်။ )
- ပြီးနောက် printer ရဲ့ POWER ကို နှိပ်၍ ပိတ်လိုက်ပါမယ်။ (တစ်ခါတစ်ရံ POWER (၂)ချက်ဆင့်နှိပ်၍ ပိတ်ပေးရသည်လည်း ရှိတတ်ပါသည်။ )
- ထို့နောက် POWER ပြန်ဖွင့်ပေးပါ။ ပြန်လည်၍ စမ်းသပ်ချက်များအရ အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါသည်။
Source of http://s174ku.blogspot.com
Posted by kmo at 8:03 PM3comments:
Folder အား မမြင်တွေ့စေရန် ဖျောက်ထားခြင်း
Folder လေးတွေကို တည်ဆောက်ထားပြီး ရုတ်တရက် အခြားသူများ သတိမပြုမိအောင် အမြင်အာရုံကို လှည့်စားနိုင်စေမယ့် နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ folder ဖျောက်တဲ့နေရာမှာ လုံခြုံမှုအရတော့ မရှိပါဘူး။ ဖျောက်ပြီး လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အခြားသော software များရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပါ နည်းလေးကတော့ Windows XP ရဲ့ထူးခြားတဲ့ Tips လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် ပြန်လည် ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ-
(1) Desktop ပေါ်တွင် Right Click တစ်ချက်နှိပ်၍ Properties ကို ရွေးပေးပါ။
(2) ထို့နောက် Keyboard မှ Alt Key ကို ဖိနှိပ်ထားပြီး 0160 ကို ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။
(3) အဲဒီအခါမှာ New Folder ဖြစ်နေတဲ့ File Name ဟာ Blank အဖြစ်ကို ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။
(4) ယင်းနောက် ၎င်း Folder ပေါ်မှာပဲ Right Click နှိပ်၊ Properties ကို ရွေးချယ် Click နှိပ်လိုက်ပါ။
(5) Folder ရဲ့ Properties dialog box ကျလာတဲ့အခါကျရင် Customize Tab ကို ရွေးချယ် Click လုပ်ပါ။
(6) ထို့နောက် အောက်ဖက်ရှိ Change Icon button ပေါ်တွင် Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ ပေါ်လာတဲ့ icon ပုံများအတွင်းမှ ဘာမှမရှိတဲ့ Icon အလွတ်လေးတစ်ခုကို ရွေးချယ်၍ click လုပ်ပေးပြီး OK နှင့် ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် သင့် Folder လေးဟာ သင့်မျက်စိရှေ့မှာပဲ တူးတူးပုန်းတမ်း ကစားဖို့အတွက် အဆင်သင့် စောင့်ဆိုင်း နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Posted by kmo at 12:37 PM No comments:
Posted by kmo at 7:23 PM No comments:
Source: NetGuide (Vol-1 ISSUE:42)31 July 2010
Posted by kmo at 8:24 PM No comments:
(၁) USB Drive ကို Custom Icon အနေဖြင့် ပေးနိုင်သည်။
USB Drive ကို Custom Icon အနေဖြင့် သုံးစွဲသောအခါ တစ်ခုချင်းသုံးစွဲတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ၎င်း Function သည် သိသာထင်ရှားမှု မရှိသော်လည်း USB Hub ကနေတစ်ဆင့် Drive များကို အများအပြား သုံးစွဲသောအခါတွင် ကိုယ်ထည့်ထားသော အချက်အလက်များကို icon ဖြင့် သီးသန့်ခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိသည်။
(၂) Chrome OS ကို Drive ထဲတွင် ထည့်ထားနိုင်သည်။
အလွယ်တကူ သယ်ယူသွားနိုင်သော Application များ ပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ထိုကဲ့သို့ Portable Application များဆန်ဆန် Portable OS ( အလွယ်တကူ သယ်ယူသွားနိုင်သော စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် ) ကို Drive ထဲတွင် ထည့်ထားပြီး ကိုယ်သွားတဲ့နေရာ ဥပမာ Cyber Cafe လိုမျိုးတွင် ကိုယ့် OS နှင့် ကိုယ်သုံးစွဲသည့် အခါ လုံခြုံစိတ်ချမှု အပြည့်အ၀ ရရှိစေနိုင်သည်။
(၃) Portable Program ငယ်များကို ထည့်သွင်းသွားနိုင်သည်။
အချို့ Cyber Cafe တွေနဲ့ ရုံးတွေမှာ Hardware လိုအပ်ချက် မြင့်မားတဲ့ Software ( ဥပမာ- Photoshop ) တွေကို တင်မထားတတ်ဘူး။ အဲလိုနေရာတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Drive ထဲမှာရှိတဲ့ Portable Application က ကိုယ်လုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(၄) အမြန်ဆုံး ရွှေ့ပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာ USB 2.0 နှင့် 2.0 Plus ကို လက်ရှိ သုံးစွဲနေကြပြီး USB 3.0 မကြာခင် တစ်ခေတ်ရောက်တော့ မည် ဖြစ်ပေမယ့် အမှန်တကယ်တမ်းမှာ USB Drive ကို သုံးပြီး USB နှင့် Harddisk ကြားမှာ အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အမြန်ဆန်ဆုံး အချက်အလက်တွေ ရွှေ့ပြောင်းစေနိုင်ဖို့ Sync back ကဲ့သို့သော software ကလေးကို ထည့်သွင်းသွားလိုက်မယ်ဆိုရင် သာမန်အချက်အလက်တွေ ရွှေ့ပြောင်းနှုန်းထက် ပိုမိုမြန်ဆန်တာကို တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။
(၅) Windows စနစ်တစ်ခုလုံးကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ Ubuntu ကို Thumb drive ထဲမှာထည့်ပြီး Portable OS အနေနဲ့ သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် အဲဒီအချိန်မှာ computer မှာ Primary ရှိတဲ့ Windows OS ကို Temp File တွေ ရှင်းလင်းတာ၊ Error တွေ ရှင်းလင်းတာ၊ စနစ်ကို စီစဉ်တကျ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတာ၊ Drive ၏ နေရာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ စတာတွေ အကုန်လုံးကို Drive ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်အနည်းငယ် များပေမယ့် အလွယ်တကူ နဲ့ Recovery ပြန်လည် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Source of : NetGuide (Vol-1 ISSUE: 42) 31 July 2010
Posted by kmo at 6:05 PM No comments:
A fully updated guide to the leading Web site creation tool, Dreamweaver CS5 Dreamweaver holds 90 percent of the market share for professional Web site development software. This popular book, which has sold more than 300,000 copies in previous editions, is fully updated for the newest version of Dreamweaver. Both beginning and intermediate Web site developers will get the information they need from this easy-to-follow guide.
Dreamweaver CS5 For Dummies For Dummies
2010 | ISBN: 047061076X | 456 pages | PDF | 10 MB
Posted by kmo at 2:27 PM No comments:
The bestselling guide to the leading image-editing software, fully updated Previous editions of this For Dummies guide have sold more 650,000 copies. Richly illustrated in full color, this edition covers all the updates in the newest version of Photoshop, the gold standard for image-editing programs. Used by professional photographers, graphic designers, and Web designers as well as hobbyists, Photoshop has more than four million users worldwide.* Photoshop is the image-editing software preferred by professional photographers and designers around the world; the latest version includes new functionality and enhanced tools * Teaches all the basics for first-time users, including how to work with the menus, panels, tools, options, and essential shortcuts * Covers how to fix red-eye, remove blemishes and wrinkles, remove people or objects fromaphoto, adjust brightness, improve color, add shadows and highlights, work with Camera Raw, decrease digital noise, create composite images, use channels and masks, optimize images for the Web, and much more Photoshop CS5 For Dummies helps both amateur and professional Photoshop users take advantage of all the program has to offer.
Photoshop CS5 For Dummies For Dummies
2010 | ISBN: 0470610786 | 432 pages | PDF | 25 MB
Even the most casual computer user wants to personalize his system and get the most out of it he can. That means optimizing and customizing Windows ? to whatever extent the user is comfortable.
Users want to createacustom desktop; set their own favorite programs as system defaults; find and install cool gadgets; make sure their network is running fast and smooth; surf the Internet quickly and safely;speed up their system?s performance; and extend the use of their computers in new and unique ways. It all boils down to optimizing and customizing the way Windows works.
Windows7Your Way is the book that frustrated users have been waiting for. This book shows users how to get the most out of Microsoft Windows, in terms of both look and feel and performance. Readers will learn both simple and more advanced ways tocustomize various aspects of the Windows interface; extend basic Windows operation; and make their systems run as fast as possible. The focus is on optimizing Microsoft?s new Windows7operating system, although much of the advice is also applicable to users of previous versions of Windows.
Michael Miller ?Microsoft Windows7Your Way: Speed Up and Customize Windows?
December 2009 | English | ISBN-13: 978-0-7897-4286-5 | 529 Pages | PDF | 15.2 MB
Post of Nubieteky
Posted by kmo at 4:55 PM No comments:
Photoshop is the world as most popular image-editing software, with more than four million users worldwide. This full-color book and DVD work together to create an entire Photoshop training class that photographers, Web designers, and graphic designers can complete at their own pace. Thirteen lessons cover the features and capabilities of the newest version of Photoshop while teaching all the essential skills.
File Size: 24 MB | File Type: PDF
Post of dragan985
Posted by kmo at 4:30 PM No comments:
Start building powerful programs with Java 6?fast! Get an overview of Java6and begin building your own programs. Even if you're new to Java programming?or to programming in general?you can get up and running on this wildly popular language inahurry. This book makes it easy! From how to install and run Java to understanding classes and objects and juggling values with arrays and collections, you will get up to speed on the new features of Java6in no time.
Publisher: For Dummies | ISBN: 0470087161 | edition 2006 | PDF | 387 pages | 14 mb
Java For Dummies by hero1021
Posted by kmo at 11:38 AM No comments: